Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Chikunguru 01, 2021
Vanhu makumi maviri nevasere vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, uye vanhu chiuru chimwe chete nemazana matatu nemakumi matatu nemumwe chete, vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare.
Vashandi vezvehutano vanoti vazhinji vavo havasati vawana mari dzavanofanirwa kupihwa kana vabatwa nechirwere cheCovid. Vanotiwo havasi kufara nekuvatyityidzirwa kwevashandi vasina kubaiwa nhomba vachinzi vachanyimwa mari dzeCovid Allowance.
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, nhasi vabatana neveruzhinji mukurangarira mushakabvu, VaJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo, gamba rehondo yerusununguko raida kuti vanhu vose vemuZimbabwe neAfrica vagare murunyararo.
Sangano reInternational Trade Union Confederation, ITUC, rinoisa Zimbabwe pakati penyika gumi pasi rose dziri kunyanya kutyora kodzero dzevashandi.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vozeya kupindira kwebato reZanu PF munyaya yekuputswa kwedzimba dzinonzi nemakanzuru pamwe nemapazi ekutongwa kwematunhu nekuvakwa kwedzimba, dzakavakwa zvisiri pamutemo.
Muchirongwa cheWomen’s RoundTable na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi munguva ino yeCovid-19 pamwe nekuputswa kuri kuitwa dzimba munguva ino yechando.